Quality Control - Xuzhou Wanda Slewing Muchibereka Co., Ltd.
Tarisa pane hunhu uye nyatso kushandisa TQM nezvinodiwa nevatengi senzvimbo yekutangira nekuenda, Kubva pamatanho mana e "mhando kuziva nezvebasa, mhando yebasa, chigadzirwa chigadzirwa,mhando manejimendi manejimendi mashandiro emhando yepamusoro "yakazara uye yakazara maitiro inoshanda kutonga, kuenderera kuvandudza kwechigadzirwa mhando, kuvandudza kugutsikana kwevatengi
1.Raw zvinhu kubva zvinogamuchirwa yakavimbika bhizimisi;
2.Production maitiro ari muchinyatsoenderana ISO9001 Quality Management System.
3.Strict mu-maitiro mhando kutonga uye 100% apedza chigadzirwa kuongorora usati wasununguka;
4.Third party chigadzirwa chekuongorora chinogamuchirwa pane chikumbiro chevatengi.
5.Kugamuchirwa kweyakaenzana chigadzirwa dhizaini maitiro uye APQP, PPAP, FEMA yekuongororwa kwesarudzo.
Isu tinosimudzira mutemo wekudzivirira kutanga uye kuenderera kuvandudza uye takatumira KPI yekutenga chigadzirwa mhando OveR makore mashanu apfuura, chigadzirwa chedu chekuongorora chiyero chinopfuura 99.5%. Mutero wekupindura kwevatengi mumakore matatu apfuura wakaderera pane 0.05%. Yakakwira chigadzirwa mhando uye rakanakisa basa rakarumbidzwa nevatengi kumba nekune dzimwe nyika.
Sayenzi yechigadzirwa mhando yekuyedza maitiro
Tiri kuitisa huwandu hwehutongi hwehunhu kubva pane zvakasvibirira kusvika kune chekupedzisira chigadzirwa, Imwe neimwe nzira ichaongororwa nevanoongorora-vane chekuita nemhando dzese dzekuona michina uye nzira dzese dzekuyedza nzira.
Raceway & giya kupisa kurapwa chidimbu dura
Kutsemuka kuongorora kweiyo raceway
Metallographic makorari muchina
Trilinear inoratidzira chimbo chekuyera
Tensile yekuyedza muchina